Cave (Golden) Tempolin'i Dambulla ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Temple Cave of Dambulla. Tempolin'ny volamena any Dambulla
19 Desambra, 2019
Ny fijerena ny antsipirian'ny tempolin'i Dambulla
Cave Temple an'ny Devarajaalen (Devaraja Vihara)
Tempolin'ny Gua Maharajaalen (Maharaja Vihara)
Tempolin'ny Gua Maha Alut Viharaya
Cave Temple an'ny Paccima Viharaya
Temple Cave of Devana Alut Viharaya
Vidin-javatra. Ny maodelin'ny fomba fiasan'ny tempoly. Tips
Tempolin'ny Gua Dambulla amin'ny sarintany
Hevitra ho an'ny Tempolin'i Cambre Dambulla
Ity tranobe lava amin'ny lava-bato lava ity, izay nalaina ho vatolampy sahabo ho 300 m ny haavony, no tempolin'ny lava-bato lehibe indrindra any SEA. Ny taonan'ny fahasarotana (izay antsoina koa hoe volamena) dia mihoatra ny 2 taona, ary ny tsangambato ao dia mandrafitra iray amin'ireo fanangonana miavaka indrindra amin'ny sary sokitra Buddha (000 sarivongana).
Ity tempoly ity dia iray amin'ny tranonkala fivahiniana be fanajana indrindra ho an'ny Buddhista eran'izao tontolo izao.
Ahitana ny tempolin'ny volamena (tempolin'ny volamena) ary ny tempolin'ny lava-bato dimy.
Devarajaalena (Devaraja Vihara)
Maharajaalena (Maharaja Vihara)
Ny Tempoly Golden dia misy dikany lehibe, saingy faritra fidirana amin'ny tempoly lava-bato 5 ihany no fidirana. Trano maoderina misy io Museum Museum of Buddhism ary trano fitantanana. Indrindra indrindra fa ny birao tapakila dia hita eto koa.
Ny vidin'ny tapakila dia ahitana ihany koa ny fotoana hitsidihana ity tranom-bakoka ity, izay misy fanomezana natolotry ny sarivongana, sarivongan'i Buddha ary sary hosodoko maneho ny fiainany. Ny tranombakoka dia misy ny sarin'ny sarin'ireo mpanatrika fiangonana sy fampahalalana momba azy ireo amin'ny ankapobeny.
Azafady azafady fa ny fidirana amin'ny tempoly dia tsy azo atao afa tsy misy kiraro. Azonao avelao mivantana eo amin'ny fidirana malalaka. Na atolotra ny efitrano fitahirizana manokana iray izay eo akaikin'ny biraon'ny tapakila. Vidin'ny serivisy fitahirizana - 25 rupees.
Rehefa avy nandalo ny biraon'ny tapakila ianao dia nahita ny tenanao teo amin'ny lampihazo iray, misy vatolampy fotsy mitaingina vatom-bato amboniny.
Ny tempoly voalohany dia somary kely, izay saika feno tanteraka amin'ny sarivongana lehibe iray ao amin'ny Buddha reclining.
Sarivongana lehibe iray hita ao amin'ny tempolin'i lava-bato voalohany
Eto, dia matetika ny serivisy ho an'ny Bouddha, izay andrehitra labozia. Ary io toe-javatra io dia miteraka ny fisian 'ny rindrin'ity tempoly voaravaka frescoes ity. Ireo mural dia mampiseho fizarana manan-danja amin'ny tantaran'ny Buddha.
Ao anatin'ity lava-bato ity koa dia misy ny sarivongan'i Ananda (mpianatr'i Bouddha), ary eo an-dohan'ny Buddha no mampiavaka azy dia misy tsangambato andriamanitra Wisnu. Ao an-joron'ny zohy dia afaka mahita sarivongan'i Buddha kely maromaro koa ianao.
Ity tempoly ity dia naorin'ny Mpanjaka Valagambaha mihoatra ny 2000 taona lasa izay. Ary na eo aza ny vanim-potoana mendrika, ny tsangambato rehetra dia voatahiry tsara.
Temple Cave faharoa Maharadzhalena dia toerana mahavariana!
Fa ny filaharana:
Voalohany indrindra dia io no lava-bato ao Dambulla, izay, toa ilay lava-bato voalohany, dia efa mihoatra ny 2000 taona. Eo amin'ny fidirana dia misy tsangambato hazo amin'ilay Mpanjaka Valagambahi mitovy. Misy sarivongan Buddha miisa 50 ao amin'ity lava-bato ity, 40 izay mampiseho ny Buddha ny fisaintsainana, ary ny 10 kosa dia mijoro Bouddha.
Ary ny zavatra tena manaitra indrindra: ao amin'ity tempoly ity, ny rano miangona eo amin'ny rindrin'ny lava-bato dia tsy mikoriana, fa miakatra, tsy raharahiany ny gravity! Ary tsy hoe mikoriana fotsiny, fa mitobaka any anaty vilia volamena manodidina izay misy sarivongan'i Buddha mieritreritra.
Io ihany no tempoly tokana any Sri Lanka, izay ao amin'ny efitrano iray dia tsy vitan'ny sarivongan'i Buddha ihany, fa sarivongan'ireo andriamanitra koa, izay ivavahan'ny olona na dia talohan'ny nahaterahan'ny Buddhism!
Ity tempoly lava-bato lava ity dia aseho amin'ny sary maro an'i Buddha amin'ny rindrina.
Misy iray tapitrisa eo ho eo eto.
Eo koa ny sarivongan'i Bouddha 55 - mijoro 42 ary tsangambato Buddha 13 amin'ny toerana lotion. Ary eo afovoany eo am-pandriana dia sarivongavan'ny Buddha mihaodihaody 9 metatra ny halavany.
Ity no tempolin'ny modely dimy tsotsotra indrindra misy ao amin'ity kompleks ity. Ho fanampin'ny frescoes amin'ny rindrina, sarivongana Buddha maromaro, misy stupa iray ihany, izay ampiasaina ho fitehirizana firavaka an'ny fananan'ny vadin'ny monoberioma. Taloha lasa izay dia norobaina ary nanomboka teo dia tsy nisy na inona na inona fiovana eto.
Ity lava-bato ity hatrany amin'ny 1915 dia trano fitehirizam-bokatry ny tempoly ihany. Nefa tamin'ny 1915 dia naverina tamin'ny laoniny izany ary nanomboka tamin'izay dia efa tempoly ilay izy. Ny zandriny indrindra tao amin'ny kompania manontolo.
Misaotra ny fahatanorany, izy no marevaka sy manintona indrindra amin'ny zohy loko. Inty misy sarivongana 11 an'ny sarivongan'i Buddha, ary koa ny sarivongan'Andriamanitra Vishnu, Kataragam, Devat Bandar, Bandaravel.
Ny tena mahaliana dia ny sasany amin'ireo anaran'ireo andriamanitra nifanandrify tamin'ny anaran'ireo tanàna maromaro tany Sri Lanka. Ary tsy mazava dia kisendrasendra izany. 🙂
Vidin-javatra. Ora fanokafana ny tempolin'ny zohy ao Dambulla. Tips
Sarany fidirana - 1500rupy.
Ny vidin'ny serivisy an'ny birao havia havia ho an'ny kiraro dia 25 rupees.
Avy amin'ny vatolampy tempoly dia misy fomba fijery mahafinaritra. Ny fiakarana dia misy maimaimpoana tanteraka. Ny fandoavam-bola dia hentitra amin'ny fanatrehana ny tempoly.
Mode mode: 7.00-19.00
Miomàna hiatrika ny zava-misy fa eo amin'ny fidirana no hametrahana anao amin'ny torolàlana amin'ny sarany tsy manam-petra.
Raha tonga amin'ny fitaterana manokana ianao dia aza minoa any an-toerana fa mitady vola hametrahana parking izy ireo. Afaka izy eto!
Fomba ahazoana ny tempolin-dranon'i Dambulla
Manomboka ao Colombo mankany Dambulla
Avy any Colombo mankany Dambulla, afaka mandeha bisy eo akaikin'ny atsinanana na avaratr'i Sri Lanka ianao. (ny 15 ny bus amin'ireny dia manomboka amin'ny 5). Hanodidina ny XNUMX ora eo ny lalana.
Manomboka ao Kandy ka hatramin'ny Dambulla
Izay fiara fitaterana mizotra mankany amin'ny lalana mankany Trincomalee, Jaffna, Anuradhapura, Khabarana, na mivantana ny fiara Kandy - Dambulla.
Hanodidina ny 2 ora eo ny lalana. (75 km). Manodidina ny 70 rupee ny saran-dàlana.
ao anaty tuk-tuk ao anatin'ny adiny roa dia afaka mahazo any Dambulla ianao 3000 rupee.
Avy any Trincomalee mankany Dambulla
Mitovitovy amin'ny Colombo, ny mifanohitra amin'izany ihany. Izay fiara fitaterana mankany Colombo na Kandy dia handalo ao Dambulla. Rehefa mandeha ny fotoana, dia handeha amin'ny 2 ora ity dia ity.
Tsy misy ny fifandraisana eny amin'ny làlambe sy Dambulla.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/9RQQaEnXCpU5VX5V8
Cave (Golden) Temple of Dambulla eo amin'ny sarintany
Famerenan'ny Cave Temple (Google reviews)
Famerenan'ny Cave ao Dambulla (Tripadvisor)
Ao amin'ny tempoly sy ny manodidina dia misy gidro. Manoro hevitra aho mba ho mailo, satria somary tsy mivavaka ihany izy ireo ary tsy mahalala hoe ny olombelona no mpanjakan'ny natiora ary tsy azo atao ny manaisotra azy na mamirapiratra eo aminy :)
Toerana mahaliana. Manoro hevitra anao aho hitsidika! Ny tendrombohitra dia manome fomba fijery mahafinaritra. Fa aza adino ny biraon'ny tapakila etsy ambany, satria tsy havela hiditra any amin'ny tempoly raha tsy tapakila tapakila izany, ary tsy maintsy midina ary miakatra indray.
Tena hahaliana ny mahita ilay rano mikoriana !!! Reko fa mbola misy toerana toy izany eto amin'izao tontolo izao, saingy tsy tadidiko hoe aiza (any an-tendrombohitra any ..